2 Samuel 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
20 Ná ɔbarima huhuni+ bi wɔ hɔ a ne din de Saba+ a ɔyɛ Benyaminni Bikri ba. Ɔhyɛn abɛn+ kae sɛ: “Yenni kyɛfa biara wɔ Dawid mu, na yenni agyapade biara wɔ Yese ba+ no mu. Israelfo, obiara nkɔ ne nyame nkyɛn!”+ 2 Ɛnna Israel mmarima nyinaa fii Dawid akyi kodii Bikri ba Saba akyi;+ Yuda mmarima de, wɔbataa wɔn hene ho fi Yordan ho kosii Yerusalem.+ 3 Na Dawid beduu ne fie wɔ Yerusalem.+ Afei ɔhene faa mmea du no,+ n’ayefam a ogyaw wɔn akyi sɛ wɔnhwɛ fie no, na ɔde wɔn guu ofie bi mu sɛ wɔnhwɛ wɔn so, na ɔmaa wɔn aduan daa. Ɔne wɔn anna bio,+ na mmom ɔtoo wɔn mu kosii wɔn wuda, na wodii kuna bere a wɔn kunu te ase. 4 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Amasa+ sɛ: “Kɔfrɛfrɛ Yuda mmarima ma wommehyia me nkyɛn nnansa ntam, na wo nso begyina ha.” 5 Enti Amasa kɔfrɛfrɛɛ Yudafo behyiae, nanso bere a ɔhyɛɛ no no twaam ansa na ɔreba. 6 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Abisai+ sɛ: “Nea Bikri ba Saba+ de bɛba yɛn so bɛkyɛn Absalom de no.+ Wo de, fa wo wura nkoa+ na tiw no, na wannya nkurow bi a wɔabɔ ho ban, na wanguan amfi yɛn ani so.” 7 Ɛnna Yoab+ mmarima no ne Keretifo+ ne Peletifo+ ne nnɔmmarima no nyinaa dii n’akyi, na wofii adi fii Yerusalem tu sãã Bikri ba Saba. 8 Bere a woduu ɔbo kɛse a ɛwɔ Gibeon+ ho no, Amasa+ behyiaa wɔn. Ná Yoab hyɛ atade de biribi abɔ mu, na ɔde nkrante ahyɛ ne boha mu bɔ n’asen. Ɔrekɔ no, efi tɔe. 9 Ɛnna Yoab bisaa Amasa sɛ: “Me nua, wo ho ye?”+ Na Yoab de ne nsa nifa soo Amasa bogyesɛ mu sɛnea ɔrefew n’ano.+ 10 Amasa de, wanhwɛ nkrante a ɛwɔ Yoab nsam no, enti ɔde wɔɔ+ ne yam, na ne nsono tu guu fam, na wamfea no so, na owui. Afei Yoab ne ne nua Abisai kotiw Bikri ba Saba. 11 Na Yoab mmerante no biako gyinaa ne ho kae sɛ: “Nea ɔpɛ Yoab asɛm na ɔwɔ Dawid afã+ no, ma onni Yoab akyi!” 12 Saa bere no nyinaa na Amasa repere wɔ mogya+ mu ɔtempɔn no mfinimfini. Bere a aberante no hui sɛ nnipa no nyinaa agyinagyina no, oyii Amasa fii ɔtempɔn no mu kɔtoo wuram. Na ohui sɛ obiara bedu ne ho a na wagyina,+ enti ɔde ntama kataa no so. 13 Oyii no fii ɔtempɔn no so ara pɛ, obiara sen kodii Yoab akyi na wotiw Bikri ba Saba.+ 14 Na Saba twaam Israel mmusuakuw nyinaa mu koduu Habel a ɛwɔ Bet-Maaka.+ Bikrifo nyinaa boaboaa wɔn ho ano, na wɔn nso kodii n’akyi. 15 Na wɔkɔe kotwaa ne ho hyiae wɔ Habel a ɛwɔ Bet-Maaka, na wɔtotoo kurow no ho akoban.+ Ná wɔabɔ kurow no ho ban, na nnipa a wɔka Yoab ho nyinaa pempem ɔfasu no sɛ wɔredwiriw agu. 16 Ɛnna ɔbea nyansafo+ bi fi kurow no mu teɛɛm sɛ: “Muntie, mmarima, muntie! Mesrɛ mo, monka nkyerɛ Yoab sɛ, ‘Twiw bɛn ha na me ne wo nkasa.’” 17 Enti otwiw bɛn ɔbea no, na obisae sɛ: “Wone Yoab anaa?” Na ɔkae sɛ: “Ɛyɛ me.” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Tie w’afenaa asɛm.”+ Na ɔno nso kae sɛ: “Meretie.” 18 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Tete no, na obiara ka sɛ, ‘Ma wonkobisa wɔ Habel na asɛm no betwa.’ 19 Mekasa ma asomdwoe+ nnipa ne anokwafo+ a wɔwɔ Israel. Wopɛ sɛ wosɛe kurow+ ne ɛnã a ɔwɔ Israel. Dɛn nti na worebɛmene+ Yehowa agyapade?”+ 20 Ɛnna Yoab buae sɛ: “Ɛmpare me koraa sɛ mɛmene kurow yi na masɛe no. 21 Ɛnyɛ saa na asɛm no te; ɛyɛ ɔbarima bi a ofi Efraim mmepɔw+ so a ne din de Saba+ a ɔyɛ Bikri ba na wama ne nsa so atia Ɔhene Dawid.+ Munyi no mmra,+ na mɛtwe me ho afi kurow yi ho akɔ.”+ Ɛnna ɔbea no ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Hwɛ! Wɔbɛtow ne ti+ afa ɔfasu no so abrɛ wo!” 22 Ɛhɔ ara na ɔbea no de ne nyansa+ kɔɔ ɔmanfo no nyinaa nkyɛn, na wokotwaa Bikri ba Saba ti, na wɔtow maa Yoab. Ɛnna ɔhyɛn abɛn+ ma wofifii kurow no ho hwetee, na obiara kɔɔ ne fie; Yoab de, ɔsan kɔɔ ɔhene nkyɛn wɔ Yerusalem. 23 Yoab dii Israel asraafo nyinaa so,+ na Yehoiada+ ba Benaia+ dii Keretifo+ ne Peletifo+ so. 24 Adoram+ na ɔhwɛɛ apaafo so, na Ahilud ba Yehosafat+ na ɔyɛɛ ɔhene krakye. 25 Ná Sewa+ ne ɔkyerɛwfo,+ na Sadok+ ne Abiatar+ yɛ asɔfo. 26 Ira a ofi Yair nso bɛyɛɛ Dawid sɔfo.*+
^ Hwɛ 2Sa 8:​18 ase hɔ asɛm.